Misafidy i Ekoatora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2018 12:35 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2006)
Taona nisiana fifidianana niteraka adihevitra sy noresahina be manerana an'i Amerika Latina iny. Raha toa ka misento amin'ny fahatoniana ireo mpanaramaso ny fifidianana taorian'ilay famaranana taraiky ny fandresen'i Felipe Calderón izay niteraka adihevitra be tany Meksika, efa fotoana sahady hieritreretana an'i Brezila, Venezoela, Nikaragoa sy i Ekoatora izao; efa samy vonona ny handeha handatsa-bato avokoa amin'ny volana manaraka. Mamaritra ny ezaka ifampizaràna nataon'ireo teratany Ekoatorian tsotra mpanao gazety (ES) ilay mpampianatra media, Christian Espinosa (ES) mba hamenoana ny fandrakofan'ireo haino aman-jery nentim-paharazana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy.
Nanomboka naka endrika ny hetsika fisantarana miainga eny ifotony (ES) avy amin'ny tontolon'ny blaogy ho fandrakofana ny fifidianana. Mamory mpanoratra tranonkala maro isan-karazany avy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena ilay tranonkala ao amin'ny sahan'ny Ecuador Elige (ES) (“Misafidy i Ekoatora”) mba ho lasa olontsotra mpitatitra mandrakitra ireo fampielezankevitry ny kandidà ho filoham-pirenena, ivelan'ny kabary mahazatra an'ireo haino aman-jery.
Efa misy sahady koa tatitra an-dahatsary avy any amin'ny sisintany iarahana amin'i Kolombia azo noho ny tatitra nataon'ny fantsona iray any an-toerana izay nakarin'ny iray tamin'ireo blaogera mba hizarana izany ao amin'ny YouTube, izay mety ho tsy hita mihitsy tany amin'ny tanàna hafa raha tsy natao an'izay.
Nataon'ny vondrompiarahamonina blaogera Ekoatoriana an-tambajotra (ES) toy ny mahazatra ny fikarakarana (ES) [ilay tetikasa]. Tsy nila nihaona mivantana, nahavita ny nifanara-kevitra tamin'ny fpmba hanombohana ilay tranonkala izy ireo avy tany Manabí, Quito, Guayaquil (ES), Carchi (ES), Riobamba, sy tanàna hafa nandray anjara koa.
Azo antoka fa hanampy amin'ny fahafantarana ireo zava-niainan'ny firenena hafa ny toy izany mba hitantanana tsaratsara kokoa ity fotoana fanararaotra ity…